Desambra 9, 2018 Denial245
Hey, ry zalahy Hi!!! Raha manana fanontaniana an-tsaina toy ny ny fomba hahazoana ny fidirana amin'ny 192.168.0.1 IP adiresy? ary ve ianao te-hahafantatra momba ny 192.168.0.1 Hiditra dingana, raha eny dia tsy mila manontany tena na mahazo manahy intsony? mahatonga eto ato amin'ity lahatsoratra ity ny ahy Article, Holazaiko anao ny fomba rehetra sy ny rafitra ny fidirana 192.168.0.1.
Inona ny 192.168.0.1?
192.168.0.1 dia tsy miankina adiresy IP ny Internet Protocol dikan- 4 (IPv4) Network (Izany dia midika hoe fantatra koa amin'ny hoe mpampiantrano adiresy ao amin'ny solosaina ny siansa). Izany no toerana misy anao adiresy IP fanahafana ny Wireless router na ny ADSL (Asymmetric Digital famandrihana-dalana,) modems novokarin'ny orinasa toy ny Netgear, D-Link, TP-Link, ary ny Hafa. Ny fitantanana hampionona ireo router azo jerena amin'ny alalan'ny fitsidihana ity 192.168.0.1 IP Address eo amin'ny navigateur.
Ahoana no hiditra ho 192.168.0.1?
➥ Voalohany indrindra, Mampifandray ny ny router ao amin'ny solosaina na amin'ny alalan'ny solosaina findainy ny Wired na Wireless fifandraisana.
➥ Next, hanokatra misy Web navigateur eo amin'ny solosaina sy ny tanana nitendry ny adiresy 192.168.0.1 eo amin'ny navigateur adiresy fisotroana Ary rehefa afaka ny hiditra gazety, ary ho hitanareo ny fidirana pejy.
➥ In ity pejy ity, dia afaka miditra ao amin'ny marina sy ny anaram-pikambana tenimiafina.
➥ Raha manadino sy tsy mahafantatra ny router ny anarana sy teny miafina, avy eo azafady hiditra Username sy Password ho "Admin" ao amin'ny roa amin'ireo saha mahatonga izany ny toerana misy anao anarana sy teny miafina ny ankamaroan'ny router.
Tsy Afaka ny Login ny My ny router, Ny hatao?
Raha nitendry 192.168.0.1 any an-mpitety nefa tsy miasa dia 192.168.0.1 Tsy ny adiresy IP ny ny router
Ny marina mahita ny fomba marina IP Address:
➥ Raha mampiasa Mac - Mandehana any Applications > Asa vaventy > Terminus. Rehefa ianao in Terminal, karazana"ipconfig" ary > hiditra.
➥ Raha mampiasa Windows - Mihazakazaha ny fikarohana eo amin'ny solosaina for Command haingana (CMD) . Raha vao ny didy efajoro misokatra, karazana "ipconfig" ary > hiditra.
Ahoana no Hanomezana Up Wireless ny router voalohany?
➥ Voalohany indrindra, mifandray amin'ny solosaina ny ny router amin'ny LAN (faritra an-toerana Network) tariby.
➥ ankehitriny hanokatra ny navigateur eo amin'ny solosaina sy ny hiditra ny https://192.168.0.1 ao amin'ny adiresy bara.
➥ Avy eo dia nisy fidirana pejy hiseho. ankehitriny
➥ Ary hiditra ny toerana misy anao anarana sy teny miafina voasoratra ao amin'ny ny router.
➥ Next Restart ny ny router ka nametraka ny SSID (Service Set Solon'anarana) Anarana. Ho ny anaran 'ny ny router izay kosa no hamindrana hafa fitaovana.
➥ Dia Manangana Security Network tenimiafina in Settings.
➥ Ankehitriny, tsindrio ny bokotra Next.
➥ Reboot ny router indray ny fotoana bebe kokoa mba afa-tsy ny toe-javatra.
➥ Ankehitriny, Afaka mitady ny tambajotra Wireless ny Service Set Solon'anarana (SSID) anarana amin'ny solosaina findainy na finday. Ary Ampidiro ny tenimiafina, ary dia ho mifandray amin'ny aterineto ny router ny fifandraisana.
Mametraha Login Password Fa D Link Wireless ny router
➥ Voalohany indrindra hanokatra navigateur sy hiditra ny https://192.168.0.1 ao amin'ny adiresy bara.
➥ Next Tsindrio eo ny bokotra mauntenance
➥ Dia tsindrio eo amin'ny Admin Button
➥ ankehitriny ovay ny tenimiafina
➥ manova tenimiafina rehefa manova Tsindrio eo amin'ny bokotra.
➥ Ankehitriny ianao dia afaka Good amin'ny tenimiafina vaovao.
Heveriko fa tokony ho ampy momba ny 192.168.0.1 Hiditra. Manantena aho fa isan-karazany ny vaovao mahasoa ho anao, fa raha miatrika olana misy mikasika ity lahatsoratra ity, Ary azafady hevitra ho anay dia miezaka mamaha ny olana haingana araka izay azo atao. Misaotra mitsidika ny toerana.
Previous Post:192.168.1.1 || Ahoana no Good 192.168.1.1 IP Address?
Next Post:Inona ny 192.168.0.0 IP Address?